Izindaba - Ukwahlukaniswa Kwe-Cardigan Organisation.
Ukwahlukaniswa Kwe-Cardigan Organisation.
Eyaziwa nangokuthi inhlangano esezingeni le-weft, inhlangano emele uhlangothi olulodwa. Ukuluka kwenaliti: ukunitha ijezi ngezinaliti ezigcwele embhedeni owodwa wenaliti. Indwangu inezakhiwo ezinkulu ezinwebekayo nezisongekayo, futhi kulula ukuwa ngemuva kokuphuka kwe-loop.
Eyaziwa nangokuthi indwangu yobambo, ingeyesigaba esifanayo no-1 + 1 ubambo no-2 + 2 ubambo. Ukunitha kwenziwa embhedeni wenaliti ephindwe kabili, bonke onxantathu bangena emsebenzini, futhi ukujula kweluphu kuyefana. Ukuluka ukunitha: imibhede yenaliti ngaphambili nangemuva ihlelwe ngemithungo ephelele.
-1 + 1 ubambo eluka
Eyaziwa nangokuthi ubambo olulodwa. Faka isicelo ku-neckline, cuffs kanye ne-hem.
-2 + 2 ubambo eluka
Inezinga eliphakeme lokunwebeka kwe-lateral kanye nokunwebeka, isigamu sokwelula ukuphindwe kabili kunaleso sezindwangu ezilukiwe.
Eyaziwa nangokuthi i-ribbed air layer structure, isakhiwo esihlanganisiwe sesakhiwo se-ribbed nesakhiwo senaliti esicaba. Izici: Izitishi eziyizicaba ezingxenyeni engaphambili nangemuva azixhunyiwe, zisesimweni esiphakeme, zijiyile kunezicubu zomzimba, nokugcinwa kwemfudumalo okuhle, ukunwebeka okuncane kwe-lateral, nokuma okuzinzile.
-Tuck Circle Inhlangano
Indwangu eboshiwe enombhede owodwa wenaliti, owaziwa nangokuthi imbali enonile yenaliti. I-tuck ingakha imiphumela ehlukahlukene yephethini njengamaphethini wemeshini, amaphethini angalingani, namaphethini anemibala. Ngenxa yokuba khona kwama-loops amade, amandla endwangu azothinteka futhi kube lula ukunweba ngokuhamba kwesikhathi.
-Fat Imbali Inhlangano
I-Fat Flower Organisation igama elijwayelekile leJihua Organisation. Ngokwe-overhang eyenziwe i-tuck, ingaphezulu lakha iphethini ye-convex, njll. Kukhona i-tuck eyodwa emaceleni kanye ne-tuck enamacala amabili; kune-single-row tuck kanye ne-multi-row tuck; kune-single-needle tuck ne-multi-needle tuck.
Igama lesayense lesakhiwo esisontekile sibizwa ngesakhiwo sikathayela. Ngokuhambisa umbhede wenaliti, imithungo iboshwe esiphambanweni embhedeni wenaliti ophindwe kabili.
-Izicubu zesikali sezinhlanzi eziphindwe kabili
Izicubu zesikali sezinhlanzi eziphindwe kabili zibizwa nangokuthi izicubu ezingaluki, futhi ibizwa nangokuthi inaliti ephindwe kabili yuanbao. It is wathungela embhedeni inaliti kabili, futhi ingqikithi yayo - a tuck emaceleni amabili. Izici: Indwangu yesikali sezinhlanzi eziphindwe kabili kulula ukuyihlanganisa futhi ikhubazeke ohlangothini olunqamulelayo, olwehlisa ukugcinwa komumo wengubo, kepha ukugcinwa kwemfudumalo kuyathuthukiswa, futhi indwangu inomuzwa okhuluphele futhi okhuluphele. It is kabanzi inaliti ukunitha.
I-jacquard weave iwuhlobo lokweluka olukhetha intambo esifundweni bese lwakha izihibe esikhaleni esithile ngokuya ngezidingo zephethini. Lapho intambo ingafakiwe, imvamisa intanta ngemuva kwendwangu futhi ingalukelwa embhedeni owodwa wenaliti. . Izici: Indwangu iyajiya, akulula ukuyikhubaza, inwebeke ihlangene nokusabalalisa okuncane, futhi inomphumela omuhle wombala.
Inhlangano yezimbali engenazimpawu
Igama lesayensi lesakhiwo sembali esingenalutho isakhiwo se-leno, esaziwa nangokuthi isakhiwo sembali sepentshisi, esingalukelwa embhedeni owodwa wenaliti. Izinaliti zokuluka zihlelwe ngokugcwele, ijezi elilodwa njengesakhiwo esiyisisekelo, nemithungo idluliswa ngokuya ngephethini. Isetshenziswa kabanzi emaphethini we-bar stitch.